Sněžné, Kraj Vysočina, Czechia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguIvona
Indlu yethu ime kumda wehlathi kwilali yasePodlesí engekude ukusuka eSněžné kwindawo entle yeŽďárské vrchy. Sigqibe ukwakhiwa kwakhona ngoMatshi ka-2019. Sikhuthazwe yindlela elula nesebenzayo yangaphakathi yeekhabhinethi zelogi zaseScandinavia. Izinto zangaphakathi zikhanya kakhulu kwaye zikhululekile. Ifestile enkulu eludongeni lwangaphambili idibanisa igumbi lokuhlala kunye neendawo ezingqongileyo, kwaye indawo yokuhlala ngaloo ndlela iyanda ngokwemvelo kwindawo eluhlaza.
I-cottage inendlela yayo yokungena kunye neplothi entle enengca. Ngaphandle ungahlala kwi-terrace okanye kwindawo yomlilo. Indawo izolile kakhulu kwaye ubusuku obuzolileyo apha abulibaleki. Amava amnandi kukubukela iintaka kunye nezilwanyana zasehlathini eziza emhlabeni. Kukho izindlu zangasese ezimbini ebumelwaneni, ubumfihlo buqinisekiswa yimithi kunye nohlaza olutyebileyo. Ngokunzulu ehlathini zihlakazekile ezinye ii-cottages, ezingaphazamisi ukuhlala.
Amagumbi okulala abekwe kumgangatho ongaphezulu. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi ephindwe kabini (180 x 200 cm) kunye neqonga leplanga lokuqala leebhedi ezimbini. Igumbi lokulala elincinci lineebhedi ezimbini zomntu omnye. Igumbi lokulala elikhulu linokuthatha ibhedi okanye iibhedi ezimbini ezongezelelweyo (oomatrasi abakhululekileyo).
Ikhitshi inefriji enefriji, i-microwave, apho unokubhaka kunye negrill, i-ceramic hob, iketile, i-french press kunye ne-mocha kettle, i-toaster, izitya, i-glassware, i-cutlery, ikofu kunye neziqholo ezisisiseko. Kuhlala kukho iibhotile ezininzi zewayini. Sikhetha abameli abomileyo beentlobo zasekhaya eziqhelekileyo ezivela kwi-winemakers enomdla. Ebantwaneni sinebhedi yokuhamba, isitulo esiphakamileyo, isitulo esinedesika kunye nezinto zokudlala kunye nomgodi wesanti ongaphandle.
Ibhedi enkulu eyi-1, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
Indawo egqibeleleyo yabakhweli beebhayisikile, abakhenkethi, abatyibilizi banqumla ilizwe, abacholi bamakhowa ingakumbi iintsapho ezinabantwana. Ngaphakathi komgama wokuhamba yiFairytale Village ethandwayo okanye iMilovský Pond, ungaqhuba uye eBřeziny kwaye uhambe ngeKuky Trail okanye eČertovina ukuya kwisihogo esidumileyo okanye imyuziyam evulekileyo iVeselý Kopec. Kukho ukwakhiwa kwamatye amaninzi kule ndawo (Dráteničky, Čtyři Palice, Devět skal, njl.), iindawo zokuhlala ezintle (iBlatiny, Březiny, Křižánky) kunye neendawo zokuhamba (Žákova hora, Chrudimka spring, meanders on the Svratkaro river, Sanque Žďár nad Sázavou). Ebusika, iindlela ze-ski ezinqumlayo zicwangciswe kwindawo okanye ungandwendwela iindawo zokuchithela i-ski eNové Město nad Moravou, Svratka naseHlinsko.